Abangaboni endaweni enhle kukhilikithi besizwa ngezinsizakudlala - Bayede News
Abangaboni endaweni enhle kukhilikithi besizwa ngezinsizakudlala
Inkampani yokubheja iHollywoodbets ilokhu iqhubekile nokuthi ixhase eminxeni ehlukene yezemidlalo. Kuyimanje iligi yabesifazane enkulu kuleli ibizwa ngokuthi iHollywoodbets Super League, iqembu lasesifundazweni iKwaZulu-Natal lekhilikithi iDolphins nayo ixhaswe ile nkampani.
Ngeledlule le nkamapami isule izinyembezi iqembu lasesifundazweni iKwaZulu-Natal lekhilikithi labangaboni, elibizilwa ngeKZN Blind Cricket. ElaboHlanga likhulume noMengameli weKZN Blind Cricket, uNdumiso Nyawose uvele wezwakala ukuthi kumjabulisile okwenziwe ngabakwaHollywoodbets.
“Ukuthola uxhaso oluqhamuka kaHollywoodbets kuyisibusiso eqenjini iKZN Blind Cricket nakuBlind Cricket yaseNingizimu Afrika jikelele. IHollywoodbets ikwaze ukuthi ixhase ngezingubo nezinsiza zokudlala. IHollywoodbets iphinde yaxhasa iBlind Cricket South Africa (BCSA) ngemali yomqhudelwano osanda ukuba khona eGoli oyiBCSA T20 National Tournament, lo mqhudelwano waqala mhla zizine wasongwa mhla ziyisikhombisa kwephezulu. Le nkampani yaqala ukungena kukhilikithi yabangaboni nyakenye ngesikhathi kuvakashe iNew Zealand izodlala neBlind Proteas, nalapho yasiza iqembu lakuleli ngezingubo zokudlala. Lokhu kusitshelile ukuthi kukhona okuhle okwenziwa ilo mdlalo kuleli,” kusho uNyawose.
I-BCSA iyona ephethe nenakekela izidingo zeBlind Cricket kuleli. Umlando uveza ukuthi iNdebe yokuqala yoMhlaba yalo mdlalo yaba ngonyaka we-1998 neyabe ibanjelwe e-India ompetha balowo nyaka kwaba iNingizimu Afrika eyaguqisa iPakistan kowamanqamu. Ngonyaka wezi-2002 nangowezi-2006 iPakistan iyona eyaba ngompetha bomhlaba ihlula iNingizimu Afrika yaphinde yahlula i-India. INdebe YoMhlaba igcine ukudlalwa ngonyaka wezi-2014 nalapho yanqotshwa khona i-India ihlula iPakistan.
Cishe baningi abazibuzayo ukuthi bawudlala kanjani lo mdlalo abantu abangaboni, ekubeni ubukeka engathi uyingozi kakhulukazi bese kushwitshwa ibhola.
UNyawose uwuchaze kanje lo mdlalo: “IBlind Cricket icishe ifane nekhilikithi ejwayelekile ngaphandle kwezinto ezimbalwa nje. Kunezigaba ezintathu zabadlali eqenjini leBlind Cricket abizwa ngo B1, B2 kanye noB3. KuB1 umdlali usuke engaboni nhlobo, kuB2 umdlali usuke ebona kancane nakuB3 nakhona umuntu usuke ebona kancane. Ibhola elisetshenziswayo kuBlind Cricket liyiplastiki oqinile omhlophe onezinsimbi ezincane ngaphakathi, lezi zinsimbi zisiza abadlali ngokuzwa ukuthi lingakuphi ibhola khona bezokwazi ukuthi basheshe balithole uma befuna ukulivimba noma befuna ukulishaya.
Omunye umehluko okhona indlela abadlali abashwiba ngayo amabhola, kuBlind Cricket ibhola lidedelwa ngaphansi kwehlombe futhi kumele liqale ukuthinta phansi kusimende, ngaphambi kokweqa umugqa odwetshe phansi. Uma eshwiba oshwibayo umthetho uveza ukuthi umuntu oshaya ibhola kumele ambuze kuqala ukuthi usemi ngomumo yini bese eyalidedela ibhola amemeze ukuthi sengiyadlala khona ezokwazi ukulilalela kahle uma seliza ngakuye ibhola” kunaba umfo kaNyawose.
Naku-Blind Cricket kumaT20 ama-ova abangama-20 njengoba kwenzeka kwikhilikithi ejwayelekile, kuthi kuma-One Day International (ODI) khona ama-ova aba ngama-40 kanti kukhilikithi ejwayelekile aba ngama-50.
UNyawose oneminyaka yobudala engama-32 nongowokudabuka ePinetown, uqale ukuba nguMengameli ngonyaka wezi-2019 kuLwezi emva kokubamba ngonyaka wezi-2018.
Echaza ngobunzima ababhekene nabo kulo mdlalo, uthe njengoba nje kudlala abantu abangaboni kuba nzima kakhulu ngoba iningi alisebenzi alikwazi ukuzithengela izinto zokuziqeqesha. Okunye okuyinkinga izithuthi kwazise abakwazi ukushayela, kusho ukuthi umuntu kumele abe nemoto ezohlezi imletha enkundleni.
Lo mdlalo unayo imiqhudelwano ethathwa njengemikhulu, lapho kubalwa iBCSA National Tournament. Kube iT20 National Tournament, iKZN Blind Cricket ihlulwe kowandulela owamanqamu ihlulwa iCentral Gauteng. UNyawose ubalule ukuthi kulo nyaka iKZN Cricket isiqale iKZN Blind Cricket League enamaqembu amathathu okwamanje.
Umkhuzi wezempi eSudan uvikela isivumelwano ne-Israel
Le nsizwa yakwaNyawose ibalule ukuthi banabo abadlali asebephakamise isifundazwe iKwaZulu-Natal, lapho ubala uSphelele Khalala (B1) benoBruce Mvundla (B2) abakwazile ukudlalela iqembu lesizwe iBlind Proteas.
Emqhudelwaneni iBCSA T20 National Tournament abadlali abathole ithuba lokujoyina ikhempu yeqembu lesizwe uMathula Dlamini (B1), u-Anathi Xelelo (B2), uThabiso Ngatane (B2) noTeboho Moloisane (B3).
UMfo kaNyawose uthe isifiso abanaso esikhulu ngesokuthi bathuthukise lo mdlalo esifundazweni iKwaZulu-Natal. Abanye abadlali abancane abanabo baqala ngokuqeqeshwa befunda eMaison School for the Blind okuyisikole esiseMlazi.
Ngokusho kukaNyawose, lo mdlalo ufundisa abantu abangaboni kanye nabanye ukuthi umuntu ongaboni angenza noma yini uma ezimisele futhi ibasiza nangokujima, bangahlali nje endlini usuku lonke nsuku zaphuma.
nguSabelo Maphumulo Oct 26, 2021